နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: ဘလော့ဂါ ဆိုသည်မှာ ဘလော့ ရေးသောသူကို ခေါ်၏
ဟုတ်လိုက်လေ ညီမရဲ့ ဘလော့ဂါဖွင့်ဆိုမှုလေးတွေကို သဘောကျထောက်ခံပါတယ်။ စုံထောက်ဝတ္ထုကြိုက်တာချင်း အိမ်နဲ့ကျောင်းကလွဲလို့ အပြင်လောကအကြောင်း ဘာတခုမှမသိတာချင်းလဲတူပါ့။
ဟုတ်တယ် မမ မမတွေးပုံနဲ့ ကျမတွေးပုံနဲ့တူတယ်
မမပြောတာတွေမဒိုးကန်တော့ ထောက်ခံတယ် ..
ဘလော့ဂါရဲ့ ဖြစ်တည်လာပုံနဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို ဖတ်သွားပြီနော်။ ဘလော့ဂါတိုင်း အချိန်ပေးနိုင်မှု မပေးနိုင်မှုဆိုတဲ့ ကွာဟချက်ကလွဲပြီး စာပေမြတ်နိုးသူတွေချည်းပဲလို့ ယူဆမိတယ်။
ကောင်းတာကတော့ စာတွေလိုက်ဖတ်နေတာပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ..။
ဟုတ်တယ်မမရေ အချိန်ရတာနဲ့ ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင် ဘလော့ရွာထဲ လည်နေရရင်ကိုပဲ ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ အကုန်မေ့ပဲ အဟီးးးး အဲလောက်ထိ :):)
ညီမ ရဲ့ ဖွင့်ဆိုချက် လေးကိုလာရောက်အားပေး
ဘလောက်ဒ်တွေကို လည်ပြီးစာဖတ်နေရရင် ထမင်းမေ့ ဟင်း မေ့ယုံတင်မကဘူး ချက်ဖို့း ပြုတ်ဖို့ပါ မေ့တော့လို့ အခု ချက်လိုက်အုံးမယ်။
I agree with the fact that spending time on blogging is much more fun and healthier than chatting!
ဘလော့ဂါဆိုတာ... ဘလော့ဂါ ပါပဲဗျာ...
စာရေးသူရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကိုလည်း မြင်လိုက်ရတယ်
ရေးလက်စ ဝတ္ထုတွေဆိုတာလည်း ပြီးအောင်ရေးဦးနော်
ဒီလောက် လက်ငြိမ်ပြီး စာရေးဆရာမတစ်ဝက် ဖြစ်နေပြီဘဲကို။ စာကို ဆက်ရေးပါ။ မရပ်လိုက်ပါနဲ့။ အားတဲ့အခါလေး ရေးပေါ့။
လုံးချင်းတွေလဲ ထုတ်ဝေနိုင်အောင် ကြိုးစားပေါ့။ အဲဒါတွေကမှ သမိုင်းဖြစ်နေခဲ့မှာလေ။
ဘလော့ဂင်းနေချင်းကိုက ကောင်းသော အကျိုးကျေးဇူးရရှိ၏ တဲ့း)
စာရေးတာ တော့ မရပ်လိုက်ပါနဲ့ အမတော်ရယ် . . . နှင်းဆီခင်းဆိုတာ ခြောက်သွေ့နေရင် ကြည့်မလှဘူးဗျး)
လာရောက်အားဖတ်ရှုသွားပါတယ်။ ဘလော့တွေမှာ စာစုံတွေဖတ်ရလို့ကော ကိုယ်တိုင်ရေးလို့ ရလို့ပါ အင်မတန်နှစ်ခြိုက်မိပါတယ်ရှင်။
အရေးအသားလေးလဲ ညက်တယ်။ ဘလော့ခ်ဂါအကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်လေးလဲကောင်းတယ်။ နောက်ထပ်စာကောင်းပေမွန်တွေ အများကြီးရေးသားနိုင်ပါစေဗျာ။
နောက်ဆုံးနှစ်ပိုဒ်ကို ဖတ်ပြီး ထပ်တူထပ်မျှ သဘောကျသွားရတယ်။ ဘလော့ဂါဆိုတာ.... ??
စာတွေ၊ ကဗျာတွေ ဆက်ရေးပါညီမရေ..။